Waa maxay sababta Black Lagoon xitaa ay u badan tahay inay hesho xilli 4 - Cradle View
Leave a Comment on Sababta Black Lagoon xitaa waxay u badan tahay inay hesho xilli 4
Qiyaastii sanad ka hor ayaan soo daabacnay maqaal ku saabsan cimilada iyo in kale xilli lagoon Madoow 4 dhici doona. Si kastaba ha noqotee ka dib markii qaar ka mid ah wararka cusub ay soo if baxeen oo aan baranay waxoogaa horumar ah, waxaan jeclaan lahayn inaan kula wadaagno fikradahaaga maqaalkan labaad, markaa fadlan sii wad akhriska. La qabsashada anime-ka ayaa markii hore la sii daayay 2006, iyadoo OVA-tii ugu dambeysay ay soo baxday 2010.
Dulmarka guud - Madadaalada Madow ma heli doontaa xilli 4?
Si loo fahmo cimilada oon ahayn Black Lagoon waxay heli doontaa xilli 4 waxaan u baahanahay inaan marka hore ka gudubno waxyaabaha qaar. Waqtigan xaadirka ah, Black Lagoon wuxuu kujiraa 10 sano oo hakad ah, iyada oo aan tilmaam badan laga helin xilli ciyaareed kasta ilaa iyo haatan. Waxaan haynaa oo keliya caddayn, caddayn xilli-ciyaareed cusub tanina waxay dhibaato weyn ku ahayd hoos u dhigidda haddii uu jiro xilli 4 iyo saadaalinta goorta ay hawada soo galayso. Waqti ayaan ku qaatay si aan u eego Netflix iyo shirkadda wax soo saarka ee masuulka ka ah Black Lagoon (guri waalan) si aad si fiican u aragto waxa la qabsiga anime mustaqbalku yahay.
OVA, Raadinta Dhiigga ee Roberta wuxuu ahaa OVA sidaan soo sheegay oo kaliya waxaa kasoo muuqday 5 qaybood, nus saac kasta oo dheeri ah. Dhamaadka Waddada Dhiigga ee 'Roberta' waxay ahayd mid aan dhammaystirnayn iyo sidoo kale sidii aan ku xusnay maqaalkeenii hore. Tani waxay uga tagtay taageerayaasha xaalad sugitaan halka Black Lagoon uu qaatay 10 sano oo hakad ah. Marka ma jiri doonaa xilli Hagaag Madoow 4? Maxayse ugu sii badan tahay hadda sidii hore?
Fahmitaanka dhammaadka Waddada Dhiigga ee Roberta - Miyuu Lagoon Madow heli doonaa xilli 4?
Dhamaadka OVA ee Black Lagoon, oo loo yaqaan 'Raadinta Dhiiga' ee 'Roberta's Blood Trail' ayaa ka tagey dhammaad aan qurux badnayn oo ku saabsan astaamaheena ugu muhiimsan, gaar ahaan Rock & Revy. Waxaan aragnay (dhamaadka dhacdada) in Revy iyo Rock labaduba ay ka fiirsanayeen dhacdooyinkii dhacay. Waxaan sidoo kale aragnay xiise aad uwanaagsan (feker ahaanteyda) dabeecad qaan-gaar ah oo ku lug leh Rock. Dabeecadda Rock waxay u aragtaa isbeddel la yaab leh sida uu uga jiray Qeybta 1aad illaa iyo waddadiisa uu hadda ku sugan yahay Qeybta 5 ee Waddada Dhiig ee Roberta. Waa astaamo dabeecad suugaaneed iyo mid aan ilaa maanta ku ammaano. Laakiin sidee ayuu dhamaadka xilli ciyaareedku u saameynayaa cimilada ama haddii kale Black Lagoon ayaa heli doonta xilli 4? Taasi waa mid ka mid ah mowduucyo badan oo aan kaga hadlayo maqaalkan ee sii wad akhriska.
Sii wadida maqaal hore - Miyuu Black Lagoon heli doonaa xilli 4?
Kahor intaanan guda galin wararka ugu muhiimsan waxaan jeclaan lahaa inaan si kooban u dul maro sababta ay u ahayd Black Lagoon oo ay u badan tahay inuu helo xilli 4. Waad akhrisan kartaa maqaalka asalka ah halkan. Waxaan horay u nidhi:
In kasta oo uusan ahayn showgii ugu caansanaa ee anime halkaas, Black Lagoon hubaal waa mid ka mid ah kuwa xusuusta badan. Tani inta badan waxay ku eg tahay jilayaasha bandhigga, haddii aad rabto dib u eegis dabeecad qoto dheer leh fadlan tag oo akhri astaamaha Black Lagoon halkan boggeena kale wixii macluumaad dheeraad ah.
Sikastaba, ku soo noqoshada rajada xilli 3 ama 4 waxay kuxirantahay sida aad ujeedo (dadka qaar uma tirin OVA-da xilliyada dhabta ah) fursadaha waa kuwo aad u sareeya.
“Waa wax la wada ogyahay in taxanaha anime qaarkood sida Full Metal Panic, Clannad iyo xitaa Black Lagoon ay hakad galaan muddo dheer, mararka qaarkood xitaa ilaa 10 sano. Waana waxa ku dhacay argagax birta oo buuxda ”
Marka waa maxay sababta tani muhiim u tahay sideese saameyn ugu yeelan doontaa cimilada ma aha in Black Lagoon ay heli doonto xilli 4 ama maya? Sababaha tan ayaa ah in haddii anime sida Birta Buuxda Argagix uu sidan sameyn karo markaa maxaa diidaya Black Lagoon, oo guud ahaan leh isla taageere hadaanay ahayn dhagaystayaasha waawayn. Waa maxay sababta tan oo kale loo fasirayo, iyadoo la tixgelinayo dhammaadka OVA: Black Lagoon, Waddada Dhiigga ee Roberta.
Waxaan kaloo dhahnay:
Black Lagoon wuxuu lahaa laba xilli ciyaareed oo waaweyn iyo hal Ova. Xilliga 1aad "Black Lagoon" oo ka soo muuqday 12 qaybood, iyo xilli 2aad "Black Lagoon, The Barrage Second". Tixda taxane ah waxay markii dambe yeelatay OVA “Raadinta Dhiiga ee Roberta, oo nasiib darro kaliya soo bandhigtay 5 dhacdo. Ka dib markii ay jireen tiro badan oo badan oo ah manga asalka ah oo qoran. ”
4-ta sababood ee ugu muhiimsan ee aan horay u soo sheegnay - Miyuu Black Lagoon heli doonaa xilli 4?
1. Marka hore, waxyaabaha laga helayo xilli kasta oo dambe oo la qabsiga anime ee Black Lagoon wuxuu leeyahay oo horeyba waa loo qori doonaa waqtiga ay xitaa tixgeliyaan xilli 3 ama 4 haddii aad tiriso Ova xilli ahaan. Waxaan uga jeednaa tan, waa inaysan jirin wax ka hortagaya istuudiyaha, ma ahan oo keliya Madhouse laga bilaabo sameynta xilliyo badan oo Black Lagoon ah.
2. Black Lagoon aad baa looga jecel yahay taageerayaasha iyo dadka wax naqdiya, aadna uma badna in Istuudiyaal kasta oo kaliya maahan Madhouse uu doorto inuusan sii wadin ama qaadan doonin soosaarka xilli kale oo Black Lagoon ah. Asal ahaan, haddii Madhouse aysan sii wadin wax soo saarkeeda anime, istuudiyaha kale ayaa sii socon doona. Tan waxaa si fudud loogu samayn karaa inta ay ka samayn lahayd dhaqaale ahaan, waana caan.
3. Dhacdadii ugu dambeysay ee Black Lagoon ma aysan laheyn gabagabo dhameystiran aragtidayda. Haddii aad aragtay dhammaadka waad ogaan doontaa waxa aan ka hadlayo, si ahaan, waxay u ahayd nooc ka mid ah dal-dillaac. Maxaa xigi doona? Xagee sheekadu aadi doontaa Waxaan u maleynayaa in soo saarayaashu aysan ogeyn inay xilli kale heli doonaan waxaanan u maleynayaa inay tani tahay sababta ay u doorteen inay sidan ku dhammeeyaan. Hadaad akhrido manga waad ogaan doontaa waxa aan ula jeedo.
4. Dhacdadii ugu dambaysay ee Black Lagoon ee ka socota OVA Roberta ee Wadada Dhiigga ayaa la sii daayay 2011. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay arrintan ku helaan maadaama ay caqabad ku noqonayso suurtagalnimada la qabsiga anime gebi ahaanba. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan ka walwalin arrintan gabi ahaanba. Argagaxa Birta Buuxda (oo lahaa 4 xilli) wuxuu qaatay 10 sano oo hakad ah ka hor intaan la ansaxin istuudiye kale kaas oo ka sii waday halkii xilli 3 ka haray. Sidaa darteed waxaad arki kartaa in xilli 3 ama 4 ay kuxirantahay sida aad ujeedo suura gal ma ahan oo kaliya, laakiin waa macquul.
Falanqaynta Madhouse - Lagoon Madoow ma heli doonaa xilli 4?
Markaad xumaan u eegto sababahan waa kuwo hagaagsan laakiin waxay ka maqan yihiin qayb aasaasi ah oo macluumaad ah oo aan hore u helin, iyo sidoo kale wax kale oo aanan ka warqabin illaa iyo hadda oo isu beddelay inay aad muhiim u yihiin. Sidoo kale waxaan qaatay waqti si aan u eego shirkadda wax soo saarka ee loo yaqaan Guriga Mad kuwaas oo masuulka ka ahaa walina gacanta ku haya soo saarista iyo sii deynta Black Lagoon. mad house waxaa la aasaasay 1972 by ex-Production Mushi animators.
Marka laga hadlayo ganacsiga istudiyaha waxaa ka shaqeeya ku dhowaad 70 shaqaale, iyadoo heerarka shaqada ay ku kala duwan yihiin iyadoo ku xiran tirada wax soosaarka hadda socda. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay maalgashatay Kuuriyaan istuudiyaha ciyaaraha Filimka DR. Madhouse waxay leedahay shirkad hoosaad, Madbox Co., Ltd., oo inta badan diiradda saareysa sawirada kombiyuutarka.
Madhouse waxay aasaastay shirkado kale sidoo kale waxaa la aasaasay 48 sano ka hor lafteeda. Sidaa darteed, waxaan ku soo gabagabeyn lahaa inay yihiin shirkad wax soo saar guuleysta. Waxay u muuqdaan inay yihiin shirkad xasilloon oo liis dheer oo shaqooyin ah magacyadooda leh. Waxaan dhihi lahayn kuma jiraan halista musalafnimo ama dhibaatooyin dhaqaale oo kale. Sidoo kale maadaama ay inta badan deyntu xor tahay waxay u isticmaali karaan lacagtaan kabitaan ahaan inay ku maalgeliyaan mashaariicda kale ee mustaqbalka ee aniga la ii arko inaan khatar ku jiro, laakiin sidoo kale bixiya abaalmarinno sare oo ah qaab royalties iyo iib sidoo
Faahfaahin dheeri ah - Lagoon Madow ma heli doonaa xilli 4?
Hadda waxay kugula yaabi doontaa inaad ogaato laakiin Netflix waxay iibsatay xuquuqda qulqulka ee Funimation in muddo ah. Dad badan oo daawaday Black Lagoon asal ahaan Funimation ayaa laga yaabaa inay xasuustaan ​​inay ku jirtay Funimation. Hagaag halkaas ma joogin mar dambe. Waxaa jira sabab fudud oo tan horayna waan ugu soo sheegay kor. Netflix waxay iibsatay xuquuqda socodka ee Funimation si ay u martigeliyaan oo kaliya. Waxaan u maleynayaa inay ku jiri karto barnaamijyo kale laakiin ma hubo. Sikastaba maxay tani muhiim u tahay? Waa hagaag maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in Netflix ay sidan u sameysay 2 sababood, oo aan ku imaan doono qeybta xigta.
Anigu ma joogo meel aan ku xukumo Netlix maktabadda anime oo aan kuu sheego cimilada fiicnaanteeda iyo in kale. Waxa aan kuu sheegi karo ayaa ah inay si aad ah u sii fidayaan oo aysan sidii hore u weyneyn. Netflix waxay u aragtay iibsashada xuquuqda qulqulka ee Black Lagoon inay tahay ganacsi ganacsi, mid aan khatar lahayn oo tixgelinaya caasimadooda, laakiin ganacsi ganacsi midna ma yara.
Waxay ogaayeen inay taasi hagaajinayso maktabadooda, waxayna dad badan siin doontaa sabab ay ku hubiyaan barnaamijkooda socodka, laakiin waxaa ka sii muhiimsan, qaybtooda anime. Iibsashada xuquuqda S ee loo yaqaan 'Black Lagoon' aad ayey uga faa'iideysan doontaa iyaga, si kastaba ha noqotee waxaa jira waddo kale oo ay uga faa'iideysan karto oo aan hoos ku sii degno.
Kahor intaanan bilaabin inaan kuu sheego waxa sababta labaad ay tahay waxaan jeclaan lahaa inaad marka hore fahanto waxa erayga "Netflix Original" loola jeedo maadaama ay leedahay afar macno oo dhammaantood aad muhiim ugu ah qodobkan iyo cimilada mala awaalka ah ama aan ahayn Black Lagoon ayaa heli doonta xilli 4 ama maya. Sida laga soo xigtay Netflix ereyga "Netflix Original" wuxuu macnaheedu noqon karaa mid ka mid ah afar waxyaalood:
Netflix ayaa amar ku bixisay oo soo saartay bandhigga
Netflix waxay leedahay xuquuq gaar ah oo caalami ah oo loogu talagalay bandhigga
Netflix waxay si wada jir ah u soo saartay bandhigga Shabakad kale
Waa sii wadida bandhig hore loo joojiyay
Marka sida aad u aragto ereyada waxay leeyihiin afar macno. Marka maxay tani muhiim ugu tahay cimilada ama aan u ahayn Black Lagoon waxay heli doontaa xilli 4 ama maya? Sababtoo ah shirkadda Netflix laftoodu waxay leedahay taariikh soo saar ama sii wadida shaqooyin sababo jira awgood u joogsaday. Goor dambe waxaan soo bandhigi doonaa tusaale aad u wanaagsan oo ku saabsan anime caan ah oo u joogsaday dhibaatooyin xagga lacagta ah illaa ay Netflix ka soo gasho oo ay bixiso maalgelin 2 xilli oo kale.
Marka asal ahaan waxa aan halkaan ku helayno ayaa ah in anime qaar sababa jira awgood ay joojiyeen wax soo saarkii sababo badan oo jira awgood ayaa markaa lagula xiriiri karaa asalka Netflix, hadday iyaga ka dib la maalgelin doono oo la siin doono adeegyo kale natiijada. Tani waxay muhiim u noqon doontaa xilli 4 ah Black Lagoon
Tusaalaha - Lagoon Madow ma heli doonaa xilli 4?
Hadda tusaalihii aan kor ku tilmaamayay waa anime caan ah oo aan hubo inaad maqashay markii la wacay Kakeguiri. Kakeguiri waxay aragtay guul badan oo ay ugu wacan tahay maalgalinta ay ka heshay Netflix taasna waxay keentay inay si dhab ah u fidiso baalasheeda. Hadda waxaan u maleynayaa inaad bilaabi laheyd inaad ogaato waxa aan halkaan ku joogo, ka hor intaanan guda galin waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo sababta Kakeguirui fursadan loo siiyay markii hore. Kuwani asalka ah ee Netflix waa kuwo xiiso leh maxaa yeelay waxay maalgeliyeen wax soo saar markii horaba wada joogsaday. Maxay tani muhiim u tahay? waxay ka dhigan tahay in Netflix aysan shisheeye ku ahayn maalgelinta mashaariicda laga yaabo inaysan xitaa noqon ROI wanaagsan, (Return On Investment) haddana waxay diyaar u yihiin inay sidaa sameeyaan.
Sharaxaadda tusaale - Lagoon Madow ma heli doonaa xilli 4?
Hadda sababta tusaalaha kor ku xusan uu muhiim u ahaa maxaa yeelay waxay taageertaa aragtidan aan ka qabo Black Lagoon iyo Netflix. Maskax, tani waa aragti kaliya, sikastaba waxaan rabaa inaan ka saaro laabta. Aragtidayda ayaa ah in Netflix ay si madax-bannaan u maalgelin doonto xilli-ciyaareedkii 4-aad ee lagoon Madoow. Ma sidaas ayey u fidsan tahay oo dhan in la tixgeliyo tan, markaan tixgelinno wax kasta oo aan kor kaga soo hadlay? Runtii uma maleynayo inay tahay, waa sababta aan u doortay inaan qoro maqaalkan, maadaama aan heystay agab cusub oo aan ku cusbooneysiinayo kii aan horay u qoray.
Gunaanad - Lagoon Madow ma heli doonaa xilli 4?
Sababta aad kor ku arki karto way cadahay inay yihiin qodob asal ah oo loo baahan yahay macluumaad dheeri ah oo aanan horay u arag. Sidaa darteed waxaan u maleynay inay muhiim ahayd loona baahan yahay in lagu daro. Waxaan ka gudubnay 2 sababood oo cusub oo aan ugu maleyneyno in xilli 4 ee Black Lagoon ay u badan tahay. Macluumaadkan dheeriga ah ee aan soo kordhinay waxay kaliya ka caawinayaan xoojinta aragtideena ku saabsan mustaqbalka anime Black Lagoon.
Macluumaadkan dheeriga ah ee aan soo kordhinay waxay kaliya ka caawinayaan xoojinta aragtideena ku saabsan mustaqbalka anime Black Lagoon. Waxay u badan tahay in haddii shirkad kasta oo wax soo saar ahi ay qaadanayso xilli ciyaareedka cusub ee Black Lagoon in ay maalgelin doonto Netflix. Waxaan aaminsanahay tan sababaha kor ku xusan awgood. Sidaa darteed waxay u badan tahay inay waligeed hesho xilli 4 maadama Netflix ay hadda leedahay xuquuqda.
Macluumaadka ama wararka aan bixinay waa xaqiiqo waana inay ka caawiyaan daawadayaasha taxanaha inay fahmaan waxa ku dhici doona anime Black Lagoon. Taasi waa waxa kaliya ee aan dhihi karno hadda waxaanan rajeyneynaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad fahamto sida loogu talagalay inay sameyso. Maqaalkani kuuma sheegayo wax aan ka ahayn xaqiiqooyinka kor ku xusan, sida aan ku sheegnay qormooyinkeenii hore warshadaha anime waa mid aan la saadaalin karin wax fikrad ahna kama lihin waxa dhici doona ee ku saabsan Black Lagoon, waxaan kaliya ku sii socon karnaa xaqiiqooyinka aan ognahay iyo macluumaadka cusub ee aan ogaanay.
Ma waxaad tahay taageere-adag oo Black Lagoon Black?
Tixgeli inaad hubiso alaabtan:
Tags: Lagoon Madoow blacklagoon blacklagoonnewsseason blacklagoonnewsseasondate blacklagoonnewsseason siidayn blacklagoononflix blacklagoonseason4 blacklagoonseason4 maqaal soo daayayforblacklagoon xilli4blacklagoon xilli4releasedateblacklagoon markiiwillblacklagoonseason4release
Gelitaan Hore 7 Seeds Ma mudan tahay in la daawado?
Gelitaanka Xiga Quintuplets Quintessential - Taariikhda 2 Premier premier